Iindaba - Malunga ne-Nail UV gel Polish, ukuba yimibala ebomini bakho
Ifowuni: + 86-769-8122 6809
Ifowuni: +86 136 6298 7261
Ikati yamehlo ejeli
Malunga ne-Nail UV gel Polish, ukuba yimibala ebomini bakho
Iipilisi ze-gel ze-Nail
Umbala we-gel polish ngoku unokuthathwa njengokusebenza kwesiqhelo kwi-salon zenzipho. Ekuqaleni, iinzipho zahlulahlulwa kakhulu zangumthubi wekristale kunye neenzipho zefototherapy, kodwa ngoku iinzipho zeekristale azifane zibonwe. Iikhonkwane ze-Phototherapy kufuneka zikhanyiswe kukukhanya kwe-ultraviolet emva kokufaka ijeli ye-phototherapy. Emva kwexesha, ukulungiselela ukusebenza, i-phototherapy glue yenziwa ukuba ibe lula ukuyifaka njenge-nail polish. Ngamafutshane, umahluko phakathi kweenzipho kunye neenzipho kukuba emva kokufakwa kweenzipho, isibane siyafuneka.
Xa usenza ipolishi yesikhonkwane, kuya kufuneka usebenzise ijeli esisiseko, enje ngebhalansi fluid, iglu esebenzayo, i-primer, itywina, njl.
I-primer kuphela kwesikhonkwane kwezi gel eziza kudibana neenzipho zakho. Ixhomekeke ikakhulu kwiasidi ebuthathaka ukunamathela kumbala weglue olandelayo kwizikhonkwane zakho. Uninzi lwazo lunomdla omncinci. Ukuze ubabophe, kufuneka ususe amanzi agqithisileyo kunye negrisi kwizikhonkwane zakho ekuqaleni. Kungenxa yoko le nto iivenkile ezininzi zeepikili zizopolisha iinzipho zakho ngezikhonkwane ngaphambi kokuzicoca, hayi kuphela ukususa amanzi kunye neoyile, kodwa kunye nokupolisha iinzipho zakho. Ikhonkco kunye ne-convex yomphezulu, ukuze uthembele ekwandeni kokungqubana kubudlelwane obungcono.
Abanye abavelisi bayakubiza ulwelo lokucoca ubuso besikhonkwane, ukomisa ulwelo. Ndikhankanyile ngaphambili ukuba kwiintsuku zokuqala zobugcisa besikhonkwane, umphezulu wobuso wawusoloko upolishiwe. Ungayicinga njengokuxhomekeka kwiindlela ezibonakalayo zokuqinisekisa ukunamathela, emva koko iindlela zamachiza zilungelelanisa ulwelo. Abenzi abaninzi ngoku bathi ngaphandle kokucoca ngokugqithileyo, banokufaka ngokuthe ngqo ulwelo olungeleleneyo kumphezulu wezikhonkwane, kwaye basebenzise indlela yakhe yokukhukuliseka kwemichiza ukususa amanzi kunye neoyile ukuqinisekisa ukubambelela kwinto yokuqala. Ukuba zii-novice okanye abo bangafuni ukupholisha iinzipho kakhulu, ungasebenzisa ulwelo olulinganayo endaweni yoko. Ewe kunjalo, awunakukhathazeka kakhulu malunga nokonakalisa iinzipho zakho kakhulu. Emva kwayo yonke loo nto, ubuso bakho bunokufakwa iasidi ngeasidi.
Umbala we-UV gel polish
Umbala we-gel polish ngumlinganiswa ophambili kwijel, kwaye umbala kunye nemilo yakho ixhomekeke kuyo. Kule mihla, ukongeza kwimibala eqhelekileyo, kukho iindlela ezahlukileyo ezinokukhazimla, iliso lekati, isibhakabhaka esineenkwenkwezi, kunye nejeli glue, iglu emdaka, njl.njl. .
Umsebenzi we-gel polish
Ngokomsebenzi owufunayo, oku kungohlulwa kubethelelwe kwipilisi ye-gel, ipolishi yokwandiswa kwejeli, njl. Ngokubanzi, ukuze ungachaphazeli imilo kunye nombala, iglu ebonakalayo iyasetyenziswa. Ukuba ufuna ukukhula, unokufuna iglu ebonakalayo kunye nokuhamba kakuhle. Ukuba ufuna ukwenza isitayile okanye ukomeleza ubucwebe, kuya kufuneka ube neglu encinci. Ngapha koko, eyona nto ibalulekileyo kukubona ukuba ezi glu zinokukunceda ukufezekisa iimfuno zakho. Injongo iphumelele.
Ukukhupha i-gel polish
Abanye abantu bakubiza ngokuba yi-silk gel polish, i-spider uv gel polish (izandi ezingonwabisiyo), njl. Ngokwenyani luhlobo lwejel yokhonkco, kodwa ine-ductility elungileyo kwaye inakho ukuzoba imigca ebhityileyo kwaye engaphulwanga. Kuyafaneleka kumzobo womgca, ngokuqhelekileyo ngepeni lokuzoba. Ngaphambili, bekukho ividiyo kwi-Weibo eyayitsalwa linenekazi laseRussia, elingenakulunga.
Ingubo ephezulu yeenzipho zejel:
Njengoko igama libonisa, ijeli yokugqibela ye-UV isetyenzisiwe kubugcisa besikhonkwane. Iingqimba zokutywina eziqhelekileyo, iindawo zokutywina ezixineneyo, kunye namanqwanqwa okutywina anqabileyo ngoku aqhelekile. Umaleko wokutywina oqhelekileyo kukukhanya kunye nokukhusela umphezulu. Unokucinga ngocingo lokutywina olunobushushu njengefilimu enomsindo, kodwa iya yomelela. Ukongeza koku kungasentla, umaleko wetywina onqabileyo uya kwenza umbala wakho wejeli ye-UV ekugqibeleni uvelise umphumo weqabaka, efanelekileyo kakhulu kwizitayile ezinamaqhosha asezantsi
Ixesha Post: Nov-21-2020
Incwadana yeendaba Hlala ubukele uHlaziyo
Umzi mveliso, iXiaohe Village, iDaojiao, iDongguan, GD, China